UleFone T2 Pro sy Ulefone X: Famaritana, vidiny ary famoahana | Androidsis
Ulefone T2 Pro sy Ulefone X: ny afovoany vaovao an'ny Ulefone
Eder Ferreño | | Finday, MWC, Ulefone
Ny marika sinoa Ulefone dia iray amin'ireo vahiny marobe ao amin'ny MWC 2018. Androany maraina dia nanolotra ny findainy roa vaovao izy ireo tamin'ny hetsika telephony malaza any Barcelona. Manokana, nanolotra telefaona antonony roa izy ireo. Manondro ny Ulefone T2 Pro sy Ulefone X izahay. Mampanantena ny ho lasa flagship vaovao ny teo aloha, raha toa kosa ny iPhone X.
Ka azontsika atao ny mahita fa ny marika sinoa dia namela antsika maro karazana sy telefaona mahaliana roa izay mampanantena hanome betsaka horesahina. Inona koa, Efa fantatsika ny masontsivana momba ny Ulefone T2 Pro sy Ulefone X. Inona no ananan'ireo telefaona ireo ho antsika?
Ulefone dia marika iray izay mahazo laza be manerantany. Ka ny fanatrehanao ao amin'ny MWC 2018 dia mety handeha lavitra amin'ny fanentanana bebe kokoa. Ho fanampin'izay, ny marika manolotra telefaona roa ao anatin'ny elanelam-potoana, izay ihetsehanao milamina. Lazainay bebe kokoa aminao ny momba ny telefaona tsirairay.
Ity telefaona ity dia natao ho ny sainam-pirenena vaovao amin'ny marika sinoa. Fitaovana feno manana famolavolana tsara izay miavaka ambonin'ny finday sisa ao amin'ny katalaoginy. Ka betsaka ny fanantenana apetraka ao. Ireo no fiparitahan'ny fitaovana:
Famaritana ara-teknika Ulefone T2 Pro
modely T2 Pro
efijery 6.7 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana FHD +
processeur Helio P70 Octa-core
Fakan-tsary aoriana Fakan-tsary indroa 21 MP + 13 MP
Fakan-tsary aloha 16 MP
Fitaovana hafa Mpamaky ny dian-tànana tafiditra ao amin'ny efijery fanekena tarehy
lafiny 78.3mm x 165.9mm x 7.7mm
Araka ny hitanao izao, Ity fitaovana ity dia nanjary iray amin'ireo tsara indrindra novokarin'ny marika sinoa hatreto. Ka azo antoka fa finday mivarotra tsara izy io ary mahomby eo amin'ny tsena. Ankoatr'izay, lasa iray amin'ireo smartphone voalohany eny an-tsena izy io miasa miaraka amin'i Helio P70 amin'ny maha-processeur anao. Mpikirakira izay ahalalantsika angona vitsivitsy tato ho ato. Ary toa izany ny processeur tsara indrindra nataon'i MediaTek hatreto.
Noho izany, ity Ulefone T2 Pro ity dia hanome antsika hery, fampisehoana tsara ary fanjifana angovo tsara. Izay angatahan'ny mpampiasa telefaona rehetra. Ho fanampin'izay, manana bateria lehibe izy, izay hanome azy fahaleovan-tena betsaka.
Ankoatra izany, Ny antsipiriany iray hafa an'ity telefaona ity izay hanome be horesahina dia ny sensor sensor an'ny rantsantanana tafiditra ao anaty efijery. Ity dia zavatra iray izay efaezahan'ny marika nandritra ny fotoana kelikely. Noho izany dia hahaliana ny mahita ny fomba fiasan'ity fitaovana ity avy amin'ny marika sinoa. Ny Ulefone T2 Pro koa dia manana fanekena endrika.
Amin'ny toerana faharoa dia ahitantsika an'ity telefaona ity izay ny aingam-panahiny dia avy amin'ny iPhone X. Satria ny marika sinoa dia nisafidy efijery tena mitovy amin'ny telefaona. Zavatra izay tsy isalasalana fa hiteraka fanehoan-kevitra marobe avy amin'ny mpanjifa. Ireo no miavaka amin'ny fitaovana.
Famaritana ara-teknika Ulefone X
efijery 5.85 santimetatra miaraka amin'ny tahan'ny 18: 9 sy ny vahaolana HD +
processeur MT6763 Octa-core an'ny MediaTek
Tahiry anatiny 64 GB
Fakan-tsary aoriana Fakan-tsary indroa 16 MP + 5 MP
Fakan-tsary aloha 13 MP
Fitaovana hafa Mpamaky rantsantanana aoriana
Araka ny hitanao izao, Ity fitaovana ity dia nisafidy efijery mitovy amin'ny an'ny iPhone X. Satria manana ny notch aza izy eo ambony. Andininy iray izay toa be mpitia be eny an-tsena, satria hitantsika ny fiezahan'ny marika sasany hanahaka azy. Ho an'ny ambiny dia miatrika afovoany misy solvent izahay, miaraka amina fakan-tsarimihetsika tsara any aoriana ary amin'ny famaritana tsara.
Ireo dia amin'izao fotoana izao ireo data roa manan-danja izay tsy fantatsika momba ny telefaona Ulefone roa. Ny marika dia mbola tsy naneho hevitra momba ny vidin'ireto fitaovana roa ireto hahatratra ny tsena na ny daty hanombohany. Tsy fantatsika raha hambara anio na aorin'ity herinandro ity. Saingy, hitandrina ny zavatra ambaran'ny marika isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ulefone » Ulefone T2 Pro sy Ulefone X: ny afovoany vaovao an'ny Ulefone
LG V30S ThinQ, V30 nohavaozina miaraka amin'ny tsara indrindra AI natolotra tao amin'ny Mobile World Congress